Xog-Tilaabo ay qaaday NISA oo wal wal ku beertay Musharaxiinta iyo Ahlusuna. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Xog-Tilaabo ay qaaday NISA oo wal wal ku beertay Musharaxiinta iyo Ahlusuna.
Xog-Tilaabo ay qaaday NISA oo wal wal ku beertay Musharaxiinta iyo Ahlusuna.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa hey’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka gaar ahaan taliska dabagalka ay wadeen qorshe ku aadan xaqiijinta amniga doorashada.
Xog laga helay saraakiil dhinaca amaanka ah ayaa sheegaya in taliyaha dabagalka NISA ahna madaxa Mukhaabaraadka Cor.Cabdullahi Dheere iyo saraakiisha la shaqeysa ay heleen liiska musharaxiin xildhibaan ay kooxda Shabaab dooneyso in ay ku soo saartaan doorashada Soomaaliya, waxaana liiskaasi la tilmaamay in ay haween ku jiraan.
NISA, ayaa horey uga digtey in liiska musharaxiinta soo galaan xubno katirsan kooxda nabadiidka alshabaab waxaana ay bilaabeen kala shaandheenta musharaxiinta beelaha ee horey ushaaciyey musharaxnimadooda.
Qorshaha hey’adda nabad sugidda gaar ahaan qeybta dabagalka ay waddo ee looga hortagayo in Shabaab ku milmaan dowladda ayaa waxaa dhinaca kale uu wal wal ku beeray midowga musharaxiinta iyo hogaanka ahlusuna, kuwaasi oo ka baqaya in liiska dadka doorashada loo diidayo ku soo baxaan xubno ay iyagu wataan.
Macluumaadka hoose ayaa muujinaya in NISA lawareegtay liiska musharaxiinta ay u arkaan in CV-goodu nadiif yahay,waxaana ilo wareedyo sheegeen in xubnaha ay nabad sugiddu reebi doontu ku jiraan musharaxiin ka socda kooxda Ahlusuna ee guriceel ka dagaalantay.
Dad badan oo isu soo taagay kamid noqoshada baarlamaanka Soomaaliya ayaa durba waxaa hogaanka dabagalka ay ku sameeyeen baaris ku saabsan xiriirka ay la leeyihiin kooxaha argagixisada, sida uu wakaaladda Al-carabiya u sheegay mid kamid ah saraakiisha Soomaaliya oo magaciisa qariyay.
NISA, hogaankeeda dabagalka ee Cabdullahi Dheere uu taliyaha ka yahay ayaa wariyay in ay heleen liiska musharaxiin ay wataan Shabaab, kuwaas oo ay ku badan yihiin Haween, waxaana quburada dhinaca amniga ay ku tilmaameen mid ay kooxdaasi ku dooneyso in ay si aan laga fileynin ugu milanto dowladda.
Walwalka dhinaca Ahlusuna iyo midowga musharaxiinta soo foodsaaray ee qorshaha nabad sugidda ku saabsan ayaa waxaa xusid mudan in aysan wali banaanka usoo saarin, waxaase socda qaban qaabada shir ay musharaxiinta ka yeeshaan arintan.
Rooble oo ah mas’uulka xilligan ugu sareeya hogaaminta doorashada ayaa la fahamsan yahay inuu la heshiyay saaxiibadiis hore, kadib markii uu garab ka waayay madaxda maamul goboleedyada maalmihii adkaa ee khilaafka, waxaana saaxiibada dhaw dhanka amniga ee Rooble kamid ah taliyaha dabagalka ahna madaxa mukhaabaraadka Cabdullahi Dheere, in ay arintan isla wadaan ayaana dad badan ka dhigayaan mid suurto gal ah.
Waxaa adag sida loo saadaaliyo doorashada Soomaaliya ee todobaad waliba la soo baxeysa xiisad cusub, isha ayaana lagu wada hayaa habka ay usoo baxaan xubnaha golaha shacabka.
Previous articleNinka afgambiga ku qabsaday Suudaan ayaa sheegay in aanu xil dooni-doonin kadib marka la gaadho 2023-ka oo codbixin loo dareero
Next articleDadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay dalka Sierra Leone ayaa si wada jir ah loo aasay
XOG-NISA oo lacag Afar dowladood laga keenay ku qeybineysa Muqdisho, Xildhibaanada oo musharaxa dhabta ah ku wareersan iyo Sir Culus.
XOG-Nabad sugidda Soomaaliya oo sadex garab noqotay, iyo Digniin Amni oo taagan.
XOG-Sababta Amni darada oo la ogaaday, Sarkaal NISA ah oo Dalka ka cararay kadib dil uu ka badbaaday, Soo laabasho iyo Kiisas uu…